Amaphoyisa aseKenya 'abulale abangu-15' selokhu kuqale isikhathi sokufika ekhaya kwe-coronavirus - Politicopathy
Amaphoyisa aseKenya 'abulale abangu-15' selokhu kuqale isikhathi sokufika ekhaya
Izikhalazo zihlanganisa ukushona, ukudubula, ukuhlukunyezwa, ukuhlaselwa, ukubanjwa inkunzi, ukuphathwa gadalala nokuhlukunyezwa ngokocansi [Brian Inganga / AP Photo]
Amaphoyisa aseKenya kubikwa ukuthi ayabandakanyeka ekubulaweni kwabantu abangu-15 selokhu uhulumeni abeka uMashi isikhathi sokufika kusihlwa njengengxenye yochungechunge lwezinyathelo zokulwa nokusabalala kwe-novel coronavirus.
I-Independent Policing Oversight Body (IPOA) esitatimendeni esibonwe yinhlangano yezindaba ye-AFP ngoLwesihlanu ukuthi ithole izikhalazo ezingama-87 emaphoyiseni selokhu kuqale ukusebenza nezinyathelo zokuphepha ezinde ngoMashi 27.
Izikhalazo zihlanganisa ukufa, ukudubula, ukuhlukunyezwa, ukuhlaselwa, ukubanjwa inkunzi, ukuphathwa gadalala nokuhlukunyezwa ngokocansi.
"Ngemuva kophenyo lokuqala, kufe abantu abangu-15 nezigameko ezingama-31 lapho izisulu zilimale zixhunyaniswe ngqo nezenzo zamaphoyisa ngesikhathi sokuya emsebenzini," kusho ithimba elibhekele ukusebenza kwamaphoyisa.
'Chaotic futhi nobudlova'
Isitatimende se-IPOA sikhishwe ekuqaleni kwaleli sonto njengoba iMelika ibigcwele intukuthelo ngenxa yesihluku samaphoyisa nokucwasana ngokobuhlanga kulandela ukubulawa komunye umuntu omnyama, UGeorge Floyd, ezandleni zamaphoyisa amhlophe.
Izishoshovu kwezokuxhumana zenhlangano zenze okufanayo nesihlava sokuhlukumezeka kwamaphoyisa eKenya, okuvame ukungaholwa.
Amaphoyisa aseKenya ajwayele umsolwa ngamaqembu amalungelo okusebenzisa ngokweqile nokwenza ukubulala ngokungemthetho, ikakhulukazi ezindaweni ezimpofu.
Ngo-Ephreli, abakwaHuman Right Watch (HRW) basola amaphoyisa ngokuphoqa isikhathi sasemakhaya ngendlela “enesiphithiphithi futhi enodlame kusukela ekuqaleni”, kwesinye isikhathi bekhahlela, bekhahlela futhi ehlikihla abantu ukuze babaphoqe ukuba baphume emigwaqweni.
Sachaza nodaba luka-Yassin Hussein Moyo, 13, oshonele enhlokodolobha, eNairobi, ngoMashi 31 ngemuva kokudutshulwa esamile ehalweni lakhe njengoba amaphoyisa ephoqa abantu ukuba bangene ezindlini zabo emgwaqweni ongezansi.
Kwabanye, umthengisi wamatamatisi ushone entshonalanga neKakamega ngemuva kokushayiswa ngumbhobho kaphethiloli we-izinyembezi, kuyilapho amadoda amane eshaywa abulawa ezingxenyeni ezahlukene zezwe.
"Kuyamangaza ukuthi abantu balahlekelwa izimpilo zabo kanye nezindlela zabo zokuziphilisa ngenkathi kuthiwa bavikelekile ekuthelelekeni," kusho u-Otsieno Namwaya, umcwaningi we-HRW ophakeme wase-Afrika, wathi ngaleso sikhathi.
Embikweni wangoFebhuwari ocaphuna ukubulawa kwabantu okungenani abayisishiyagalombili endaweni yaseNairobi abahola kancane, abakwa-HRW bathi amaphoyisa "ayaqhubeka nokubulala abasolwa ngobugebengu nababhikishi ngegazi elibandayo yize ephokophela izingcingo zokuqeda ukubulawa kwabantu nokusebenzisa amandla amakhulu".
UNgqongqoshe wezangaPhakathi uFred Matiangi ngoLwesihlanu ukugxekile ukweqiwa ngamaphoyisa, "kodwa bavele ngaphandle kokudweba yonke le nkonzo ngebrashi efanayo", kusho ihhovisi lakhe esitatimendeni.
"Sinezinselelo ekusebenzeni kwethu komthetho, ngakho-ke kumele sonke sisukume siqale ukubhekana nabo ngokubumbene esikhundleni sokwenza ukubandlululana ngamaphoyisa," kusho uMatiangi.
Ngokwesitatimende, umshushisi omkhulu wezwe uNoordin Haji usungule uphiko oluphenya amacala aphenya ngamacala odlame lwamaphoyisa, kanti njengamanje usebenza amacala ayi-171 anjalo anesihluku, angama-81 awo asenkantolo.
NgoLwesine, i-IPOA imemezele ukuthi kuzoboshwa amaphoyisa ayisithupha futhi ashushiswe, elinye ngokubulawa kukaMoyo, elinye ngokudubula abulale uthisha wesikole sesibili ngenkathi ephendula ngokugqekeza kwakhe emakethe entshonalanga yeSiaya, kanye nabanye abane ngokushaya kanzima umuntu ngesikhathi sokuboshwa.
Ekuqaleni kuka-Ephreli, uMongameli Uhuru Kenyatta waxolisa ngalolu dlame kulandela ukuphoqelelwa kwehora lesikhathi.
"Ngifuna ukuxolisa kuwo wonke amaKenya ngoku ... ngokweqile okwenziwe," kusho ngaleso sikhathi. "Kodwa ngifuna ukukuqinisekisa ukuthi uma sisebenza ngokubambisana, uma sonke siqonda ukuthi le nkinga iyasidinga sonke, futhi uma sidlulela ngasikhathi sinye, sizonqoba."
Kuze kube manje, iKenya iwaqinisekisile amacala angama-2,474 ama-coronavirus nokufa kwayi-79 okuhlobene.
SOURCE: I-Al Jazeera nezinhlangano zezindaba
Thumela Previous UWalmart Uthembisa u- $ 100 Million Ukulwa 'Ne -icicic Racism'
Post Next IMeya yaseCalifornia Ihoxa Ngemuva Kwe-imeyili Mayelana NamaPhoyisa Akhahlamezekayo Ama-Spark Outrage
Imibuzo ibambelela ekuguqukeni kwamaDemocrats kumhlangano osobala
I-RNC IQAPHELA IZIVIVINYO ZESIVIVINYO ZOKUXHUMANA NGESITHUNYANA SE-JACKSONVILLE AMID CORONAVIRUS SURGE EFLASIDA Njengoba ikoronavirus ikhuculula izwe kule ntwasahlobo,
Yini Umlando Wokuhogela Okungasifundisa Ngomuthi, I-Misogyny, Ne-Farts Yasendulo
Umfanekiso wesithombe nguSlate. Izithombe ngu-Getty Izithombe Plus. USlate unobudlelwano nabathengisi abahlukahlukene online. Uma uthenga okuthile
Indlu iphasisa i-DC statehood bill: Nakhu ukuthi bekuzosebenza kanjani
Phendula ku-Twitter 1276599922268069889I-Retweet ku-Twitter 1276599922268069889Njengo-Twitter 1276599922268069889
Ababusi baseMelika baphinde bavulele kancane izifundazwe njengoba amacala e-COVID-19 ehlasela
Phendula ku-Twitter 1276598340856078336I-Retweet ku-Twitter 1276598340856078336Njengo-Twitter 1276598340856078336
Ukukhishwa kwezindaba zakuleli kuqhuma umkhankaso weBiden ngemuva kokuhlakazwa emcimbini ePennsylvania
Phendula ku-Twitter 1276597990493351936I-Retweet ku-Twitter 1276597990493351936Njengo-Twitter 1276597990493351936